अभिलेखहरू लोड गर्दै - स्मार्टमी
ट्याग अभिलेखहरू: लोड हुँदै
डोम » "लोडिंग" को साथ चिन्ह लगाइएका प्रविष्टिहरू
IoT, समाचार, शाओमी होम
एमआई एयर चार्ज टेक्नोलोजी - शाओमीले चार्जमा क्रान्ति देखायो!
अवतरण, वायरलेस चार्जिंग, माई एयर चार्ज, Xiaomi
म यस प्रविधि को लागी वर्षहरु कुर्दै छु। कुन आश्चर्यकर्मीले यो गर्ने पहिलो हो भन्नेमा मलाई अचम्म लाग्यो र शियोमीले रेस जितेको कुरा थाहा भयो। यो एमआई एयर चार्ज टेक्नोलोजी हो, अर्थात वायरलेस फोन चार्जिंग। कुनै केबलहरू छैन, होईन ...
चार्ज स्मार्टफोनको लागि एक औंठी? सामसुसँग विचारहरू छन् ...
16 डिसेम्बर 2020
सबै चीजहरू बर्षदेखि परिवर्तन हुँदै आएको छ, केवल ब्याट्रीहरू कुनै न कुनै रूपमा अझै स्थिर छन्। पावर बैंकहरूको आगमनदेखि हामीले कुनै कठोर क्रान्ति देखेका छैनौं। सामसु ,सँग एक विचार रहेको छ कसरी हामीलाई अचम्म पार्ने। तिनीहरूको भर्खरको पेटेन्टले रिंग देखाउँदछ जुन ...
W०W वायरलेस चार्जिंग? केवल सियाओमीसँग!
80W, अवतरण, वायरलेस चार्जिंग, Xiaomi
श्याओमी एक पटक फेरि वायरलेस चार्जिंगमा अग्रणी बन्न पुगेकी छ र आफैलाई कुट्यो। तिनीहरूको भर्खरको चार्जरले शक्ति देखाउँदछ ... नयाँ शाओमी वायरलेस चार्जरले धेरै टाढा प्रतिस्पर्धा छोड्छ। W० डब्लू वास्तवमै धेरै हो, र अझै सम्म उनीहरूले देखाए ...